Tabobaraha Barcelona oo ka hadlay sababtii uu kursiga kaydka u dhigay Lionel Messi
Tabobaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa sheegay in aannu jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya isaga iyo kabtanka kooxda Lionel Messi kaddib markii xiddiggan u dhashay waddanka Argentina kursiga kaydka lagu bilaabay kulankii xalay. Messi oo ciyaarta beddel ku soo galay ayaa kooxdiisa Barcelona guul ku hoggaamiyey. Barcelona ayaa xalay soo afjartay afar kulan oo ay isku xiga oo aanay guul ka gaadhin horyaalka Spain laakiin arrinta layaabka noqotay ayaa ahayd in Messi lagu bilaabo kursiga kaydka. Tabobare Ronald Koeman ayaa Messi soo galiyey ciyaarta markii uu bilaabay haafkii dambe isaga oo beddelay Ansu Fati.
Messi oo soo galay ciyaarta oo 1 iyo 1 ah ayaa wacdaro ka dhigay garoonka isla markaana guul muhiim ah u horseeday kooxdiisa. Tabobaraha Barcelona oo sheegayey in Messi aannu caafimaadkiisu taam ahayn si loogu bilaabo ciyaarta maaddama oo kulankii horyaalka kooxaha Yurub ee Dynamo Kyiv dhaawac fudud ka soo gaadhay. Tabobaraha Barcelona ayaa farxad ka muujiyey guusha kooxdiisu gaadhay xalay
In this article:Barcelona Ronald Koeman, Messi